विदेशबाट मिस्डकल आयो ? कल ब्याक नगर्नुस् ! – onlinedarpan:
Posted on October 29, 2018 October 29, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 189 Views
काठमाडौं – तपाईको मोबाइलमा नचिनेको विदेशी नम्बरबाट ‘मिस्ट कल’ आइरहेको छ ? छ भने महत्वपूर्ण कल होला भनेर ती नम्बरमा कल फिर्ता नगर्नूस्, तपाईको ब्यालेन्स गुम्न सक्छ ।
विभिन्न देशका नम्बरबा६ नेपालमा त्यसरी कल आउने गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। ‘२–३ सेकेन्डमात्र कल गर्द पनि १–२ सय रुपैयासम्म व्यालेन्स काटिन सक्छ।’ अर्यालले भने यस्ता कल ठग्ने उद्देश्यले आइरहेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
Share7TweetGoogle+Pin07sharesफेसबुकका झण्डै ५ करोड प्रयोगकर्ताको अकाउन्टमा ह्याकरहरुले निसाना लगाएको घटना सेलाउन नपाउँदै फेसबुक मातहतकै ह्वाट्सएपमाथि पनि ह्याकिङको खतरा बढेको छ । टेक्नोलोजी साइट जेड डी नेटले ह्वाट्सएपमाथि ह्याकिङ्गको जोखिम बढिरहेको सम्बन्धमा एक नयाँ खुलासा गरेको छ । उसको दाबी अनुसार ह्वाट्सएपमा एक बग देखा परेको छ । उक्त बगले ह्याकरहरुलाई प्रयोगकर्ताको अकाउन्टभित्र प्रवेश दिइराखेको छ विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…